ဦးအောင်ဇေယျဘုရား သို့ အလည်တစ်ခေါက် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Photography » ဦးအောင်ဇေယျဘုရား သို့ အလည်တစ်ခေါက်
ဦးအောင်ဇေယျဘုရား သို့ အလည်တစ်ခေါက်
Posted by aye.kk on Mar 20, 2012 in Photography | 30 comments
ထိုင်းမြန်မာ နှစ်နိုင်ငံ နယ်စပ် ၊ နယ်ခြားမြို့ မယ်ဆိုင်ဖက်ခြမ်း ရှိ ဦးအောင်ဇေယျဘုရား သို့အလည်ဘုရားဖူးသွားရောက်စဉ် အမှတ်တရ လက်ဆော့ရိုက်လာ သောပုံလေးများနှင့် နယ်စပ်ရှူခင်းပုံ လေးများဖြစ်ပါသည်။
ဦးအောင်ဇေယျ ဘုရားမုခ်ဦးအ၀င်ဝရှိ ဦးတိဘွားရုပ်ပုံ
ဦးအောင်ဇေယျ အလောင်းမင်းတရားကြီး တည်ထားကိုးကွယ်ခဲ့သောစေတီ
ကြားဖူးပြီး တစ်ခါမှ မမြင်ဖူးဘူးမို့မြင်ဖူးချင်နေတာကြာပေါ့
အဟေး..အဟေး..(သဘောခွေ့ရယ်သံ)
မင်္ဂရာဘား…..(အာရီး အသံနဲ့ ) နှုတ်ဆတ်ချင်ပါတယ်ဗျာ
သဂျိန်းမိန်း ကို ကြောက်လို့တစ်ပုဒ် မတင်ချင်တော့ပါဘူး
ကုန်ကြမ်းလဲမရှိ.ကုန်ချောလဲ မရှိ နဲ့(ညဘက်ခိုးခိုးကစ်တဲ့ ဗူးခွံတွေပဲ ရှိတာ)မိုလို့ 
မိန်းမ လစ်တဲ့အချိန် အားတဲ့အချိန် ခေါင်းမကိုက်တဲ့အချိန် ရွာထဲဝင်ပါ့မယ် တိုတို့မတို့ ရေ..
ယိုးဒယားတွေချစ်တာ ဘုရင့်နောင်ကိုလားလို့ ၊ ဘုရင့်နောင်က သူတို့အတွက် အလေးချိန် အချိန်အတွယ်တွေ တီထွင်ပေးခဲ့တယ် တိုင်းပြည်ကိုတိုးတက်အောင်လုပ်ပေးခဲ့တယ် ဆိုပြီး ချစ်ကြတယ်လို့ကြားဖူးတယ် ၊ အဲဒါကြောင့် တောင်ငူသားဘုရင့်နောင်ကို ကော့သောင်းပို့ပြီး လက်ပိုက်ခိုင်း ယိုးဒယားဘက်ကိုကြည့်ခိုင်းထားတာတဲ့
ကျွန်တော်မှတ်မိတာလဲ မှားနိုင်တာပဲ အမှန်သိသူများ ပြောပြပေးစေချင်ပါတယ်
As conqueror of predecessor of Thailand, he was well-known by the Thai people, and often with respect. Chote Praepan (pen name “Jacob”), an influential Thai journalist and author expanded his story into an epic historical fiction, “ผู้ชนะสิบทิศ” or “Puchana Sib Tid”, literally winner (conqueror) of the ten directions.
The Thai novel later spawnedatelevision andamovie series. The song of the same name from the movie series, performed by Charintra Nanthanakorn, remains one of the most recognizable and popular songs in Thailand.
အောင်မယ်ငီး မွန်က ယပက်လက်ကို ကူပီး ဗမာကို ပြန်တိုက်ခဲ့ဒယ်တဲ့တော့…..
လောပန်အန်တီအေးကေ ၊ ယိုးဒယားနယ်စပ်မှ ပြန်လာပါသည် ။
ရွာသူားများ ဖူးမြှော်ရန် ဘုရားပုံတော် တင်ပေးသည့်အတွက် သာဓုသာဓုသာဓု ပါ ခင်ဗျား
လောပန်းတွေ ပေါတယ်လား အန်တီ မျိုးစေ့ နဲနဲလောက်ပေးပါ အိမ်မှာစိုက်ထားချင်လို့ ..:P
အမ aye.kk ရဲ့ကျေးဇူးနဲ့ဖူးသွားပါတယ်။ မုန့်ဈေးတန်းမှာလဲ အမaye.kk နာမည်ပြောပြီးဝင်စား လိုက်ပါတယ်။ ကုသိုလ်လဲရ ၀မ်းလဲဝသွားလို့ကျေးဇူးပါ။
မရောက်ဖူးတဲ့နေရာ (ရောက်ဖြစ်ပါ့မလားတောင် မသိနိုင်တဲ့နေရာကို) ဓာတ်ပုံကြည့်ပြီး ရောက်လိုက်ရလို့ ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ် မအေးရေ။
အရူးအမူး ရောက်ဖူးချင်တဲ.နေရာလေးပါ ။ ငယ်ငယ်တုန်းကနွမ်ဂျာသိုင်းဝတ္ထုဖတ်ပြီးကတည်းက စိတ်ကူး
ထင်ရတာဘဲ …….လေလံပွဲတွေရှိတုန်းကလဲ ခရီးစဉ်ပျက်သွားခဲ.ရတယ် ။
လာဖြစ်ရင်တော့ လာလည်မယ်နော် အန်တီအေးရေ့..
မရောက်ဘူး တဲ့ နေရာလေးတွေကို ခေါ်သွားလို့ ကျေးဇူးပါ အစ်မအေးရေ။
ဒီ ဦးတိဘွားရုပ်ပုံ က ထိုင်းဗားရှင်း ထင်ပါရဲ့။
အလောင်းမင်းတရားဦးအောင်ဇေယျကို ယိုးဒယားပြည်သူများချစ်၍ရုပ်ထုလုပ်ကိုးကွယ်ထား တာ ဆိုတာကို တော့ အခုမှဘဲ အံ့ဩကြီးစွာ သိလိုက်ရပါတယ်။
ထိုင်းတွေက မြန်မာဘုရင်တွေ ကို အသေမုန်းတာလို့ ဘဲ သိထားခဲ့တာကိုး။
မုန့်တွေ က ၅ခုဝယ် ရင် ဘတ် ၅၀လို့ ရေးထားတာလားဟင်။
ဘုရင့်နောင်နဲ့ လက်ဆက်ခဲ့တဲ့ဆုပန်ထွာတို့ 
အရပ်ရှစ်မျက်နှာထောင့်တွေမှာကင်းမြီးကောက်ရဲ့ အမြီးတွေကိုယိုးဒယားဖက်လှည့်ထားခဲ့လို့ 
ကျနော် ရွှေဘိုသား ဖြစ်ပြီးသွားချင်တယ် မရောက်ဖူးဘူး
look like everything smooth…
အဲလိုနေရာလေးတွေ ရောက်ဖူးချင်တယ်။ အတော့်ကို လေ့လာစရာများမယ်နော်။ ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်တွေများမယ်နဲ့တူတယ်နော်။
ဦးအောင်ဇေယျဘုရားကို ဖူးသွားပါတယ် ………..
ဆူး မရောက်ဖူးသေးဘူး အဲဒီနေရာကို.. တခါလောက်တော့ သွားလည်ဖို့ စိတ်ကူး ရှိပါတယ်။
မုန့်ဈေးတန်းမှာ စိတ်ကြိုက် ၀ယ်စားချင်တယ်။
အန်တီအေး အဲ့ဒီမုန့်ဈေးတန်းက တချို့မုန့်တွေ အရမ်းချိုတာတော့ မှတ်မိတယ်။ ဟုတ်လားမသိဘူး။
သင်္ကြန်လည်း စည်တယ်တဲ့။ ချောင်းလေးမှာ ရေဆော့ကြတာတဲ့။ အခါတွင်းလည်း ပုံလေးတွေ ရိုက်ပြီး တင်လို့ အဆင်ပြေရင် တင်ပေးပါအုန်းနော်။ မြင်ဖူးချင်လို့ပါ။
အပြင်မထွက်ဘဲနဲ့ ပါသွားတဲ့ဖုန်းကင်မရာလေးနဲ့ ရိုက်ထားတဲ့ပုံတွေရှိတယ်..
မသိရင်တော့ချောင်းလေးနဲ့ တူတယ်လို့ ထင်ရတယ်။
မရောက်ဘူးတဲ့ဒေသမို့လို့ ကြည့်ရုံတင်မက ပုံတွေပါဒေါင်းသွားပါတယ်အန်တီအေးရေ